Indlu yefama yeBoutique enechibi elikufutshane ne-Assisi - I-Airbnb
Indlu yefama yeBoutique enechibi elikufutshane ne-Assisi
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguSilvia
I-Le Ginestre Ibhedi kunye neBreakfast Assisi ikumgama omalunga ne-9km ukusuka e-Assisi kumaphandle amahle ase-Umbria kunye neNtaba i-Subasio enomtsalane ebekwe ngasemva.
Ngelixa uhlala nathi ungajonga iisayithi ezininzi zommandla kwaye uphumle xa ufika 'ekhaya', nokuba kukwithafa lelanga, ukudlala iping pong okanye egadini ejikeleze idama lethu elikhulu elineembono zalo ezimangalisayo.
Ngokweendwendwe zethu eli lelona gumbi linomtsalane kumagumbi ethu e-3 Bed & Breakfast, abekwe kumgangatho ongaphezulu, malunga nezinyuko ezili-12 ukusuka kumgangatho ophantsi. Inegumbi elinye lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa, zombini igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela elinefestile evula umbono kwintlambo eluhlaza nakwiMonte Subasio. Uya kuba nokufikelela kwi-wifi yasimahla kuyo yonke ipropathi (ngaphandle kwechibi) kunye ne-smart tv kwigumbi lakho.
Indawo yethu yokulala kunye nesidlo sakusasa kumgama oziikhilomitha ezili-9 ukusuka e-Assisi sisiseko esifanelekileyo nokuba ungathanda ukuhlala ixesha elingakanani nathi. Kungaba ubusuku obunye okanye ezimbini ukuhlala ukuba ufuna ukuma kwindawo yase-Assisi / Umbria ngelixa uhamba ilizwe, inokuba ubusuku obuthathu okanye obune ukuhlala kwiholide yesixeko okanye uhambo olude lwempelaveki okanye iveki okanye ngaphezulu ukuba ufuna ngokwenene ukuphumla okanye ukufumana ithuba lokubuyela 'ekhaya' emva kohambo losuku ukuya kuLwandle lweAdriatic, iLake Trasimeno okanye iFlorence okanye iRoma. Ukuchitha iholide yeziko lamawele yenye ingcebiso, chitha ubusuku obumbalwa kunye nathi kwaye udibanise kunye nobusuku obuncinane kwenye indawo. Zininzi iinketho, nceda uqhagamshelane nathi ukuba sinokuba nalo naluphi na uncedo.
Lonke ixesha lonyaka linobuhle balo apha: ebusika konke kunoxolo kwaye kuthulekile kwaye iimarike zeKrisimesi ngoDisemba zijika zibe yindawo emangalisayo emangalisayo. Intwasahlobo iyamangalisa nje ngayo yonke imibala evela kwimithi ehlumayo kunye neentyatyambo kunye namaqondo obushushu sele elungile ngokwenene. Ukuchitha ihlobo kunye nathi kwaye umzekelo ukujingiswa nje echibini uphethe iglasi yewayini esandleni sakho kufana nokuhlala kwindawo yokuzola ngelixa inokuxakeka kwezona ndawo zinomtsalane. Kwaye ikwindla ilungile kubantu abangabuthandiyo ubushushu behlobo kwaye bakwazi ukuhamba ngaphandle kwexesha leholide elixakekileyo, imbonakalo yomhlaba iya kukumangalisa ngokupheleleyo.
Siyathanda ukunxibelelana neendwendwe zethu, ukunceda ngezimvo kunye neengcebiso, ukumamela ingxelo kunye namava abo kwaye sibelapho kwaye senze konke okusemandleni ukwenza ukuhlala kwabo kungalibaleki.